Ngwa ahia ahia kacha mma! Versiondị 3 | Martech Zone
The ịrịba otu na Postano emeela ya ọzọ, karịrị ihe niile m tụrụ anya maka ngwa ngwa mkpanaka yana nke 3 nke Martech. Ekwere m na ọ bụ kacha mma ahịa iPhone App si n'ebe (na-abịa Android)!
Nke mbu bu mmeghari ohuru nke mejuputara uzo Facebook dika aka ekpe. Ọ na - eme ka ọ dị mfe ịpịgharịa ma họrọ otu ụdị ma ọ bụ mgbasa ozi ịchọrọ ịmegharị na - gụnyere Pọdkastị anyị, vidiyo na Ihe Omume - ka ị na-abawanye mbata mgbe ị na-agụ otu isiokwu. Ọ bụ a mara mma ma na nnọọ usable interface.
N’ime ọnwa atọ anyị ejirila okpukpu atọ karịa ọnụọgụ ndị na - eji ngwa agagharị agagharị - ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3 ugbu a Na, dị ka anyị dere banyere tupu, na njikọ aka na ọnụ ọgụgụ metụtara ndị ọrụ ngwa mkpanaka dị oke mma. Ndị ọrụ anyị na-agụkwu, na-elekwu anya, na-egekwu ntị ma na-etinyekwu oge karịa na usoro ọ bụla ọzọ. N'ihi Webtrends maka nnukwu nyocha ngwa mkpanaka!
Ikekwe nke kachasị mkpa bụ na enweghị njikọta na WordPress pụtara na anyị ekwesịghị ime ihe ọ bụla iji mee ka ngwa anyị dị ọhụrụ. Pọdkastị, vidiyo, blọọgụ posts na ụdị blọọgụ a na-ebugharị na-akpaghị aka ka anyị na-ebipụta ọdịnaya na saịtị anyị. Ngwa ndị ahụ nwere mkpanaka mkpanaka yana ikike ịchekwa isiokwu kachasị amasị gị. Postano kwesịrị ịnata ụgwọ ọrụ maka ọrụ dị ịtụnanya ha mere.
Budata ngwa mkpanaka anyị ugbu a!
Ndị a bụ Stats anyị ruo ụbọchị
Tags: ngwa igwengwa iphonetechnology technology blog ngwangwa mkpanaakamobile blog ngwapostanopostano ngwa3 Versionwordpress mobile ngwa
Onye Nkwalite: Ime Anya Gị na kamera weebụ gị